GFG Series High-kunyatsoshanda Zara Bed Dryer - China Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment
Mafomu Zviri yakanakira mushonga, zvokudya, inosimbisa, zvemakemikari bhizimisi uye zvichingodaro, sutu nokuti vachiyanikira madota rine zvakanaka fluidity Principle Kana Mhepo Yakanatswa uye pakutsamwisana nayo hunosumwa kubva pasi chiutsi dzinoshandisa uye ichipfuura chinovhara bwendefa mbishi zvinhu. In kushanda mukamuri, mamiriro fluidization achiumbwa kuburikidza anokurudzira uye akaipa kuvafurira. The mwando iri Ipwa uye kubviswa nokukurumidza uye mbishi zvinhu wasvava pakarepo Features 1. Mamiriro Urume pamubhedha ndiye R ...
Zvakakodzera mushonga, zvokudya, inosimbisa, zvemakemikari bhizimisi uye zvichingodaro, inoenderana nokuti vachiyanikira madota iro rine fluidity zvakanaka
Kana mhepo iri Yakanatswa uye pakutsamwisana nayo hunosumwa kubva pasi chiutsi dzinoshandisa uye ichipfuura chinovhara bwendefa mbishi zvinhu. In kushanda mukamuri, mamiriro fluidization achiumbwa kuburikidza anokurudzira uye akaipa kuvafurira. The mwando iri Ipwa uye kubviswa nokukurumidza uye mbishi zvinhu paoma nokukurumidza
1. Mamiriro Urume pamubhedha ari kumativi kuitira kudzivisa akafa pakona.
Inside the Hopper pane kurunga kuitira kudzivisa agglomeration pamusoro yakatsvuka zvinhu nokuita Canal kuyerera. (Small muchina haritsigiri stirrer)
2. granule iri asunungurwa kuburikidza nzira wekushanduka pamusoro. Nenzira iyi, zviri nyore chaizvo uye nokukurumidza. Zvaikosha maitiro inogona rikagadzirwa chinodiwa.
3. Zvinonzi kushanda panguva ezvinhu yakaipa kumanikidzwa uye chisimbiso. Mhepo iri yakasvinwa zvakanaka. Saka zviri nyore ichishanda uye zvakakunakira okuchenesa. Zvinenge michina iri zvinoenderana nezvaidiwa GMP.
4. nokuomesa nokukurumidza iri kutsanya uye tembiricha iri yunifomu. Vakawanda kuomesa nguva yava maminitsi 20-30.
Chiyamuro vanokwanisa (kg)
Yakawanda mhepo (m3 / h)
Air kumanikidzwa (mmH2O)
Vakasvikapowo simba (KW)
Yaikurudzira nokukurumidza (RPM)
Steam kunwa (makirogiramu / h)
Operation nguva (Maminitsi)
15-30 (zvinoenderana mbishi zvinhu)
Next: KJG Series booka Nereza Dryer
Chingwa mafufu Zara Bed drier kuvat
Chingwa mafufu Zara Bed Dryer
Bread mafufu Fluidized Bed Dryer
Kuramba Zara Bed Dryer
runoramba Zara Bed Dryer Price
Urume Bed drier kuvat
Urume Bed Dryer
Zara Bed Dryer And Granulator
Zara Bed Dryer For Coal
Urume Bed Dryer For Granule
Zara Bed Dryer Granulator
Zara Bed Dryer Machine
Zara Bed Dryer Price
Urume Bed Kuomesa Equipment
Urume Bed Kuomesa Machine
Urume Bed Granulating drier kuvat
Urume Bed Granulating Dryer
Urume Bed Granulator Dryer
Fluidized Kuomesa Machine
Granules Application Zara Bed Dryer
Granules Powder Application Zara Bed Dryer
High kushanda Zara Bed Dryer
High vakarongeka kufashaira Zara Bed Dryer
Horizontal Zara Bed Dryer
Industrial Zara Bed Dryer Machine
Lab Zara Bed Dryer
Salt Zara Bed Dryer
Vertical Zara Bed Dryer
LPG Series High-Speed ​​Centrifugal mwaya Dryer
ZLG Series Vibrating-Zara Bed Dry